जुनु राना - ‘हङकङको ताइतोङ डाँडामा तीज मनाएर राती जंगलको सुनसान बाटो फर्कंदै थियौं। म पछाडि छोडिएको देखेर एक जना अंकल बाटोमा टक्क उभिए। हातमा स्यान्डल बोकेर दौडिरहेको मलाई देखेर उनले के सोचे खै? अचानक मेरो हात समेतर आफूतिर ताने।’
प्रगति राई - ‘यदि भोट गर्न पनि पाउने हो भने मात्र आर्थिक सहयोग गरिन्छ’ भन्ने सारा विदेशमा रहने नेपालीले एकै स्वरमा भन्ने हो भने बल्ल पैसाको साथै मानिसको पनि मूल्य रहनेछ।
कमल पौड्याल - हिजोअस्तिसम्म पश्चिमी मूलका गोरा छाला भएकाहरूलाई पैसावाल खर्चालु ग्राहक मान्थे हङकङे व्यवसायी। अहिले आफ्नो ढोकामा उभिएका गोराहरूलाई पर्खाएर ‘नि हाउ’ भन्दै स्वागत गरेर पहिला चिनियाँहरूलाई भित्र लैजान्छन्।
जुनु राना - तपाईं एक नारी। साधारण परिवारकी छोरी। पूर्वी पहाडी जिल्लामा जन्मेर रास्ट्रको केन्द्रीय राजनीतिमा तपाईंको उपस्थिति म र म जस्ता हरेक छोरिहरुका लागि गौरवको विषय हो। महिलाप्रति अनुदार समाजमा तपाईंको उपस्थिति नै गौरव बनेको छ।
मेरी आमा र हरियो तिलहरी
इन्द्र थेगिम - आमाको सम्झनामा इन्द्र थेगिमको कविताः
कमल पौड्याल - आमा चढेको जहाज हङकङ विमानस्थलबाट नउडुन्जेल बसिरहेँ एयरपोर्ट पछाडिको पार्कमा। जहाज उडेपछि आँखाले देखुन्जेल हेरिरहेँ। एक किसिमको ठूलो आत्मसन्तुष्टि भएथ्यो मलाई त्यसबेला।
कमल पौड्याल - नेपाली कांग्रेसका लागि मात्रै नभएर देश र जनताका लागि जीवन अर्पण गरेका भट्टराई वास्तवमै त्यागी र सन्त नेता थिए। गीतामा भनिएजस्तै ‘काम गर्ने तर फलको आशा नराख्ने।’
कमल पौड्याल - उतिबेला हङकङमा बेलायती सेनामा रहेका नेपाली र तिनका परिवारका लागि गरगहना बनाउन गन क्लबमा कार्यरत बेखारत्न शाक्य अवकाशपछि नेपाल फर्के। र, नेपाली कांग्रेसलाई राम्रो आर्थिक सहयोग गरेबापत उनले ललितपुर पाटनको मेयरको टिकट पाए र जिते पनि।
कमल पौड्याल - एउटा धर्म छाडेर अर्को धर्म ग्रहण गर्नु भनेको एउटा डर, भय छाडेर अर्को भयको पछि लाग्नु हो भन्ने लाग्छ मलाई।
कमल पौड्याल - ‘अब तपाईंलाई हरेक कामका लागि यहीं धाउनुपर्छ। बरू अहिले आएको बेलामा नागरिकताको लागत निकालेर लैजाऔं, ललितपुरबाट लिन सजिलो हुन्छ, यसैउसै यसलाई घूस खुवाउनु परेपछि।’
कमल पौड्याल - ‘पिताजी राणातन्त्रमा सिंहदरबारतिर नझुकी सीधै हेर्दा सिपाहीले बन्दुक ताकेको किस्सा सुनाउनुहुन्थ्यो। आज गणतन्त्रकालको उही सिंहदरबारमा छोरालाई पास मिलेन भनेर भित्र जान दिएनन् सिपाहीले। त्यो पनि देशमा अग्रगामी छलाङ मार्ने पार्टीको गृहमन्त्री भएका बेला।’
कमल पौड्याल - हामीले एउटा थिम बनाएका थियौं। बतासेडाँडा पुगेपछि कापी र कलम बाँड्ने अनि सबैले बीस मिनेटभित्र जे जस्तो कविता लेख्न सकिन्छ लेख्ने र पालैपालो त्यहीँ सुनाउने।
जुनु राना - मंकीहिल होस् व याउमातेइ कम्युनिटी हल, इन्डिया क्लब होस् वा पाकिस्तानी क्लब, ती धेरै ठाउँमा हुने कार्यक्रममा नेपाली समुदाय किन बदनाम हुँदै आएको छ?
इन्द्र थेगिम - मतिर मायालु नजर फ्याँक्दै तिमी बोल्यौ, ‘रात परेपछि तिमीसँगै बसेर खाएको अरुले देख्यो भने मेरो घरमा बास हुन्न। बरु सर्ट ड्राईभमा कुरा गर्दै सहरलाई एक चक्कर मारौं।’
जुनु राना - आफ्नो देश फर्कनु हाम्रा लागि बुहारी टाढाको माइती आए समान हो। जो बिहे गरेर गएको घरलाई जीवन सुम्पिन्छे भने जन्मघरमा कहिलेकाहीँ पाहुना बन्छे। हाम्रो स्वदेश फिर्ती त्यस्तै बनिसकेको छ।
कमल पौड्याल - केही महिनाअघि मलेखुको घले होटलमा खाना खाएर पछाडिपट्टी रछ्यानमा चुठ्न जाँदा सुसाउँदै बगिरहेको त्रिशुली हेरेर फेरि तिनै माधव धिमिरेलाई सम्झेँ। उनको काम गर्ने शैलीलाई सम्झेँ। मदन भण्डारीलाई झैं किन आफ्नो गर्भमा लियो त्रिशुलीले उनलाई!
छोरीले जब बलात्कार शब्दको अर्थ बुझ्नेछिन् ...
दिलीप वान्तवा - मेरी छोरी एक दिन त्यो समयमा पुग्नेछिन् जुन समय उनले बलात्कार शब्दको अर्थ बुझ्नेछिन्। त्यो बेला के मेरी छोरीले आज जस्तै मलाई विश्वास गर्लिन?
जुनु राना - उसलाई सोहि स्थानमा उभिएर मोबाइल चलाएको, कफी पिएको देख्ने गरेको पनि लगभग दुई महिना भैसकेको थियो। हल्का श्वेत वर्णको ऊ उमेरमा अन्दाजी ३५–३६ को हुनुपर्छ।
कमल पौड्याल - जब मेरी आमा हङकङ आएकी थिइन्, मसँग समय कम थियो। अहिले मसँग प्रशस्त समय छ, मेरी आमा छैनन्। ज्याकसँग आमा थिइन्, उनीसँग समय थिएन। हुँदा हुँदा आमा छिन् उनी नै छैनन् अब।
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ - आफ्नै चौघेरामा रमेको हङकङको नेपाली समुदायमा धेरैका लागि ज्याक महर्जन अपरिचित नै थिए। अनेक स्वार्थ, विवाद, चलखेल, आत्मप्रचार र सम्मानको लेनदेन हुने यहाँको माहोलमा उनी सधैं लो प्रोफाईलमै रहे।
कमल पौड्याल - कुनै पनि समय दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थामा उडिरहेको जहाजभित्र म जीवनको अन्त्य आजै हुँदैछ त भन्ने प्रश्न मनमा खेलाउँदै थिएँ।
जुनु राना - सुन्दर ठाउँ इलाममा जन्मेकी एक सशक्त हस्ताक्षर हुन् शुष्मा रुपाबुङ राई, अर्थात् सुन्दर फूल– ‘लाहुरेनी फूल’।
कमल पौड्याल - मैले भनें, ‘सगरमाथा माथि लडाकु विमान उड्न कि त युद्ध नै हुनुपर्यो, जसको संभावना कम छ। अमेरिकी सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास पनि सायद नहोला।’
जुनु राना - संघारमा पाइला राख्न नयाँ बर्ष आतुर छ। र, २०१९ मा पनि केही गर्ने कोशिश रहने नै छ।
टीका राना - माओवादीले स्कुलबाटै उठाएर लैजालान भन्ने डरले हामी बाजेसँगै बाग्लुङबाट कुस्मा पुग्यौं र बस चढेर भैरहवातर्फ लाग्यौं।
जुनु राना - हाम्रो पुस्ताले जस्तो महिनावारी हुँदा पानी नछुने, माइतीको अनुहार हेर्न नपाउने, पाँच दिनसम्म लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थादेखि कोसौं दुर छ छोरीको पुस्ता। यो परिवर्तनको साक्षी आज म आफै बनें।
कमल पौड्याल - हामी ‘हङकङमा व्यवसाय गर्ने नेपालीको ठूलै समूह छ, जसले हजारौंलाई रोजगार दिएको छ र सरकारलाई दशौं मिलियन डलर कर बुझाउँछ’ भन्ने सन्देश दिन चाहन्थ्यौं।
कमल पौड्याल - ‘ए त्यसो भए आज बाबा–छोरी डे। आज मलाई रेष्टुरेन्टमा लगेर सुसी खुवाउँछौ त?’
जुनु राना - ‘माओवादी र उसका सेनाले आक्रमण गरे, मान्छेहरु गाउँ छाडेर भागे’ भन्ने खबर सुनिरहेको थिएँ। कान्छा बाबाको कुरा सुनेपछि मनमा डर बसिसकेको थियो। कुरा सकेपछि कान्छाबा सुत्न जानु भयो। अब म एक्लै भएँ।
त्यो दिनदेखि हङकङमा यो पार्टीको समर्थनमा उभिएँ
कमल पौड्याल - नेपाल भूकम्पको दुःखमा रहेको बेला नाकाबन्दी लगाएर नुनचुक छर्किने नजिकको छिमेकीभन्दा सात समुन्द्र पारी भएर पनि मल्हमपट्टी गरिदिने डिएबीलाई मैले नेपालको असल मित्र देखें।